सुवास नेम्वाङलाई ऋषि धमलाको प्रश्न : संसद् अवरुद्ध गर्दा तपाईँलाई हिनताबोध हुँदैन् ? (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १ असोज । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा प्रष्ट भएर आफूहरु संसदीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘हाम्रो नेतृत्व, पहल र प्रयासमा बहुदलीय प्रतिष्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणाली स्थापित छ । हामी त निरन्तर यसको पक्षमा उभिएका छौं ।’
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले आफूहरुले बाध्यात्मक र अपवादको रुपमा संसद् अवरोध गर्नुपरेको सुनाए । उनले सभामुख संसद्मा भएका सबै दलहरुको नेता भएको उल्लेख गरे । तर, सभामुखले आफूहरुको नेताको रुपमा भूमिका नखेलेको उनको गुनासो छ ।
उनले सरिता गिरीलाई समाजवादी पार्टीले निश्काषन गर्दा र टोपबहादुर रायमाझीहरुको हकमा पनि माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्दा सभामुखले तुरुन्तै सूचना टाँस भएको तर एमालेको हकमा भने सभामुखले कुनै कारबाही नगरेको गुनासो पोखे । सभामुखले भेदभाव गरेको उनको आक्रोश छ । पत्रकार धमलाले तपाईजस्तो संविधानसभाको अध्यक्ष भैसकेको व्यक्तिले संसद् अवरुद्ध गर्न नाराबाजी गर्दा हिनताबोध हुँदैन भनेर सोधेको प्रश्नमा नेम्वाङले भने–‘यो हाम्रो बाध्यता हो । एउटा कुरा म प्रष्ट गर्छु ऋषिजी, हामीले यो किन उठाईरहेका छौं । दल विभाजन बचाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा हाम्रो हो । निर्वाचन आयोगले समेत दल विभाजनको निर्णय गर्दा यो १४ जना नपुगेपनि अरु संख्याले पुग्छ भनेर निर्णय गरेको छ। यसो हुँदाहुँदै पनि सभामुखले किन १३ दिनसम्म रोकेर राख्नुभयो ? किन निर्णय गर्नुभएन ?’